IMilestone College - iBLI Isikole solimi eCanada
Izinhlelo zePathwayIMilestone College
Indlela yakho eya eCanadaIMilestone College
IMilestone College, "ireferensi" emhlabeni wezemfundo nezinhlelo zomhlaba wonke eziholela ekwamukelweni kangcono kwabanye, ukuxhumana okungcono, nobuqotho bebhizinisi.
Umsebenzi wethu ukufundisa abantu ngezinhlelo zemfundo ezenzelwe umhlaba wonke eziwasiza ukuthi axhumane futhi asebenze ngempumelelo emhlabeni jikelele.
Inani eliphambili leMilestone College lisuselwa ebuqothweni, inhlonipho nokwamukelwa ekuxhumaneni nezizwe ezahlukahlukene futhi kuhlose ukuqinisekisa ukuhwebelana okulinganayo nokuqonda amasiko ahlukene.
IMilestone CollegeOlunye ulwazi
Izinga le-BLI French 6
UKUSEKELWA KWAMAKHAYA - KUSEKELA - AMAHORA angu-1800
Omunye wemisebenzi eceliwe kakhulu yizinkampani ezincike kumakhompyutha ekusebenzeni kwazo ukutholakala kochwepheshe abenele bokusekela i-IT. Umuntu onolwazi olwanele ophendula kubasebenzisi maqondana nezinkinga zobuchwepheshe noma ukusetshenziswa kwesoftware. Othisha bethu, ngolwazi lwabo nangamakhono abo, sebesungule izindlela zokufundisa ezingagcini ngokunaka abafundi, kepha ezibandakanya abafundi ngenkathi bethuthukisa inkuthazo yabo yokwenza kahle.
Uqede ngempumelelo i-BLI French level 6
Ikhophi yediploma yakho yesikole samabanga aphezulu ngesiNgisi noma ngesiFulentshi, ebhalelwe futhi ihunyushwe